Drum karazana lavenona mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any - China Kechengyi ny Tontolo Iainana sy ny Electric Power Protection Teknolojia
Single horonan-taratasy tain-drendrika crusher
Rotary rano mpiara-
1. General Sava lalana
Ny karazana amponga lavenona mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any dia karazana amponga hafanana ampiasaina hihena ny ampahany ara-nofo, ny rafitra fifanakalozana sy ny hafanana dingan'ny izay hafa noho ny an'ny mahazatra hafanana. Fa ny karazana amponga lavenona mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, telo hafanana fomba famindrana toy ny mafana taratra, conduction, ary convection miasa ao amin 'ny andro, ary antonony dia hihena Kilonga rano sy ny faharoa dia rivotra. Izany dia avo fahombiazana lavenona hihena fitaovana, izay natao hitsena ny fepetra takiana ny lehibe-boky CFB etona. Ny amponga lavenona mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any ahitana ny amponga, lavenona famenoana fitaovana, fitaovana lavenona marary mitsika, fiara fitaovana, fitaovana fampitana, hihena ny rano sy ny herinaratra rafitra fanaraha-maso ny fitaovana, izay ampiasaina manokana ho an'ny lavenona mafana hihena ny CFB etona
Ny amponga lavenona mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any ahitana ny amponga, miodina rafitra, rafitra fiara, lavenona lavo fitaovana, fitaovana lavenona marary mitsika, hihena ny rano sy ny herinaratra rafitra fanaraha-maso ny fitaovana. Ny tena rafitra sy ny asa dia toy izao manaraka izao:
Drum: izany dia ahitana ny anatiny sy ivelany amponga amponga, ary hanangana ny lavaka ny rano fonosina miaraka amin'ny Rotary mpiray sy rano hiverina sodina. Ny rindrina anatiny ny anatiny amponga dia welded amin'ny miolakolaka-Nandamina visy lelany sy longitudinal lelany, izay afaka mamindra ny hafanana ny tain-drendrika ny mivezivezy hihena rano mafana conduction, convection sy ny taratra.
Ny amponga no asa lehibe ampahany amin'ny amponga lavenona mangatsiaka kokoa, ary mangatsiaka kokoa ny lavenona dia azo zaraina ho GTL andian-dahatsoratra monja lavenona amponga sy mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any GTLS andian-dahatsoratra maro-Tube projection amponga lavenona mangatsiaka kokoa araka ny firafitry ny amponga.
Miodina rafitra izany dia ahitana ireo fanohanana peratra, manohana kodia, ka sambory kodia. Ny fanohanana ny peratra no nametraka ao amin'ny ivelan'ny amponga, izay entin'ny mitondra fiara rafitra mba hanosika ny amponga miodina teo amin'ny kodia efatra fanohanana. Ny haavon'ny ny amponga azo teo amin'ny fanitsiana ny Fanohanana ny kodia. Ny trondro dia afaka mametra ny kodia axial fifindran 'ny amponga.
Ash lavo fitaovana: izany no mandrafitra ny manhole, fanitarana mpiray, lavenona lavo sodina, lavenona tanky, lavenona fitaovana famehezana. Ny etona ambany lavenona ho latsaka any an-amponga ny lavenona mangatsiaka kokoa amin'ny alalan'ny famenoana ny lavenona mpitsoka sodina rehetra. Ny lavenona tanky manana ratsy-tsindry famehezana seranan-tsambo. Ny fanisiana tombo-kase lavenona fitaovana afaka misakana ny lavenona avy amin'ny famoahana ny hetsika manohitra ny kofehy ireny.
Ash marary mitsika fitaovana izany dia ahitana ny lavenona fivoahan'ny famehezana fonony sy lavenona fivoahan'ny, ary nametraka amin'ny ratsy-tsindry rivotra seranan-tsambo sy ny lavenona fitsihany seranan-tsambo. Ny fanisiana tombo-kase rakotra fanaovam-panavotana no mandrafitra roa removable faritra (ambony sy ambanin'ny), izay mety ho an'ny fikojakojana.
Hihena ny rano rafitra: izany no mandrafitra ny miodina mpiray, ny rano sodina ny amponga, hiverina ny rano sodina, vy Hose. Dia afaka mitondra ity tontolo ity intsony ny hafanana variana amin'ny lavenona. Ny miodina mpiara-mizara ny Inlet rano ka miverina rano mitovy amin'ny fivoahan'ny farany, izay mety ho an'ny fikojakojana sy ny azo antoka ihany koa. Ny miodina mpiara-dia amin'ny fiarovana Accessories fitaovana toy ny tsindry metatra, RTD, ny fiarovana miditra tsimoramora. Ireo Accessories dia afaka hapetraka amin'ny hihena fantsona ny rano araka ny fepetra takiana ny asa.
Electric fitaovana fanaraha-maso: izany no tena manondro ny herinaratra sy ny fanaraha-maso mifandraika kabinetra fitaovana fanaraha-maso, izay afaka manome hery sy fanaraha-maso famantarana ny lavenona mangatsiaka kokoa. Afaka mandefa famantarana avy lavitra mba hahazoana lavitra fanaraha-maso.
3. Main Technical fikirana
Ny modely ny lavenona mangatsiaka kokoa dia GTL (S) D - N × L (ankavia na ankavanana), eo izay, D mijoro ho amponga savaivony (mm), anisan'izany ny 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, ary 2000 MG; N dia mijoro ho an'ny fahafahana (T / h); L mijoro fa ny elanelana misy eo Inlet sy ny jery (mm). Araka ny fametrahana toerana samy hafa, ny lavenona mangatsiaka kokoa dia azo sokajiana ho karazana ankavia sy ankavanana karazana, miatrika ny lavenona fivoahan'ny mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, izany no sisa karazana raha ny maotera eo amin'ny ankaviany sy ny tsara karazana raha ny maotera eo ankavanana. Ny halavan'ny mangatsiaka kokoa ny lavenona dia tsy raikitra, izay matetika mifandray amin'ny fahafahana, lavenona mari-pana, ary ny laharana elanelana misy eo amin'ny Inlet sy ny fivoahan'ny. Ny Output ny lavenona mangatsiaka kokoa dia 0 - 80t / h. Ary ny hafanana dia hihena 80 - 150 ℃
Apetraho ny lavenona mangatsiaka kokoa eo amin'ny fisaka tany amin'ny nitondra fahafahana avo noho 6000Pa, (mpanolotra Bolt dia tsy ilaina), dia mametraka nandinika lalina vy teo amin'ny tany ho amin'ny zorony efatra amin'ny lavenona mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any hitsangana ary Weld ny fanampian'ny vy eo amin'ny nandinika lalina vy ho misakana mifindra, rehefa mangatsiaka kokoa ny lavenona efa mipetraka eo amin'ny toerana
Raha ny fototra dia avo noho ny tany, pour longitudinal roa na efatra transverse mivaingana esory tsotra fanambaninao amin'ny hery bebe kokoa noho ny C30 amin'ny tany. Rehefa ankavia karazana sy mahitsy karazana lavenona mangatsiaka kokoa dia nanao fandaharana akaikin'ny samy hafa; fa ny mety fikarakarana sy ny fanamboarana, ny fiara maotera tokony fandaharana amin'ny ivelany lafiny, izay midika hoe hametraka ny ankavia karazana lavenona mangatsiaka kokoa amin'ny ankavia, ka ny ankavanana manoratra eo ankavanan'Andriamanitra.
GTL andian-dahatsoratra monja drum lavenona mangatsiaka kokoa
1) Large Output, izay mety hahatratra 80t / h ao amin'ny ambony indrindra
2) Lehibe anaty toerana, izay mety ho mora ho an'ny maso sy ny fikojakojana amin'ny vidiny ambany.
Next: Pneumatic tain-drendrika marary mitsika miditra tsimoramora
Manual hafanana ambony vavahady miditra tsimoramora
Fiara rojo fitaovana
Tain-drendrika sakafo fitaovana
Hafanana avo fanoherana mitafo fanitso compensator